မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Boire '' Conjugate လုပ်နည်း
(သောက်ရန်) မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာ '' Boire '' Conjugate လုပ်နည်း
အဓိပ္ပာယ် Boire, "သောက်" လည်းမမှန်ကြောင်းကိုတစ်ဦးအလွန်ဘုံပြင်သစ်ကြိယာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကကြိယာ၏ရိုးရှင်း conjugation ပါ၏ သူတို့ကအတိတ်ကာလ participle နှင့်အတူအရန်ကြိယာ၏ပုံစံထားရှိရေးသောဒြပ်ပေါင်းသောင်းချီ, မပါဝင်ပါဘူး။
'' Boire '' သတိပြုပါ
Boire တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အလွန်အမင်းမမှန်ကြောင်း -re ကြိယာ ။ ပုံမှန် -er ကြိယာရှိပါတယ်နှင့်မမှန် -er ကြိယာရှိပါတယ်, နှင့်မမှန်အုပ်စုတစ်စုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငါးယောက်ကြိယာ prendre န်းကျင်ပုံစံများ, battre, mettre, rompre, နှင့်အမြစ်စကားလုံး -craindre နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်သောသူတို့ကိုသို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။
သို့သော် boire သည်ဤပုံစံများဆို fit မထားဘူး။ ဒါဟာသင်သီးခြားစီအသီးအသီးအလွတ်ကျက်ရန်ရှိသည်ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောသို့မဟုတ် unwieldy conjugation ရှိသည်သောကျန်ရှိသောမမှန် -re ကြိယာ, ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားအလွန်ဘုံနှင့်အရေးကြီးသောကြိယာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ပွငျသစျထဲတွင်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးကျွမ်းကျင်ပါတယ်သည်အထိတဦးတည်းကြိယာတစ်ရက်ကျက်မှတ်ကြိုးစားပါ။ သူတို့ကပါဝင်သည်: absoudre, boire, clore , conclure , conduire , confire, connaître , coudre , croire , ဆိုးရွား , écrire , Fair , inscrire , Lire , moudre, naître , plaire , rire , suivre နှင့် vivre ။
conjugation '' Boire '' သိကောင်းစရာများ
သော်လည်း Boire-ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်ချယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုလိုမှနေ့စဉ်ဘာသာစကားမှာအသုံးပြုတဲ့ဟူ.လည်း "သောက်" က boire un အာဏာသိမ်းမှု ( "သောက်ရှိသည်") ၌ရှိသကဲ့သို့, idiomatically ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါကြိယာ prendre ( "ယူ") ကိုလည်းသို့မဟုတ် "သောက်ရှိသည်" ဟူသောအသုံးအနှုနျး prendre un verre ၌ရှိသကဲ့သို့, boire ဘို့အတွက်ရပ်နိုင် "တဦးတည်းသောက်ရှိသည်။ "
အောက်က conjugation ထဲမှာ, ကြိယာ၏အမြစ်သည်မစုံလင်တင်းမာနေအတွက်ဆက်လက်အရာပစ္စုပ္ပန်အများကိန်းအတွက် buv- မှပစ္စုပ္ပန်အနည်းကိန်းအတွက် boi- ကနေပြောင်းလဲသတိပြုပါ။
'' Boire '' ၏ရိုးရှင်းသော conjugation
il boit boira buvait Pass တေးရေးဆရာ
nous buvons boirons buvions auxiliary verb avoir
vous buvez boirez buviez အတိတ် participle Bu
je boive boirais ဘတ်စ်ကား busse
tu boives boirais ဘတ်စ်ကား busses
il boive boirait ဒါပေမဲ့ ဒါပေမယ့်
nous buvions boirions bûmes bussions
vous buviez boiriez bûtes bussiez
ils boivent boiraient burent bussent
ပြင်သစ်တွင် 'Boire' 'အသုံးပြုခြင်း
ဒီထူးဆန်းတဲ့ပေမယ့်ဘုံကြိယာနေ့စဉ် Fench အတွက်အသုံးပြုသည်မည်သို့ဥပမာကြည့်ဖို့ boire တူသောမမှန်ကြိယာသင်ယူတဲ့အခါမှာဒါဟာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Study.com အောက်ကဥပမာကိုသရုပ်ပြအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေ၌ရှိသကဲ့သို့အရိုးရှင်းဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့်အတူစတင်အကြံပြု:
Jacques boit de l'eau ။ > Jacques ရေကိုသောက်။
ဒီအသုံးပြုမှုအတွက်, သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အီလ်ဟုပါတယ် (သူက) ရေကိုသောက်, ဒါကြောင့်သင်ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေအတွက်အနည်းကိန်းတတိယလူတစ်ဦးများအတွက် conjugation, ကိုအသုံးပြုပါ။
et မာရီ boivent du The မာ့ခ်, Florence ။ > မာ့ခ်, Florence, နဲ့ Mary လက်ဖက်ရည်ကိုသောက်လော့။
သငျသညျ (သူတို့) မာ့ခ်, Florence, et မာရီများအတွက် Third-လူတစ်ဦးအများကိန်းနာမ်စား ils အစားထိုးနိုင်သောကြောင့်အလားတူပင်ပထမဦးဆုံးဥပမာဖို့, ဒီ conjugation ils / elles များအတွက်ပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။
buvez-vous du ကော်ဖီဆိုင် Madame la Présidente? > Madame သမ္မတ, သငျသညျကော်ဖီမသောက်ရပါသလဲ?
ဒီဥပမာထဲမှာ, သငျသညျ Madame la Présidenteတိုက်ရိုက်စကားပြောနေ, ဒါကြောင့်သင်ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေအတွက်, ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အနည်းကိန်း, vous (သင်) အတွက် conjugation ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ အခြား conjugation ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်အလွတ်ကျက်ရန်အချိန်ကြာလျှင်သင်သိမီ, tu vas boire ပဲရစ်အတွက် Seine မြစ်ကလမ်းဘေးကဖေးမှာပြင်သစ်စကားပြောဇာတိတူသော-ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းကို -you'll ။
အဘယ်မှာရှိထဲမှာအမှား '' Parlez-vous Français? '
(အောင်နိုင်မှ) "Conquérir" Conjugate လုပ်နည်း
"လက်ခံသည်" (Accept ကိုယူမှ) Conjugate လုပ်နည်း
စပိန်အတွက်အဓိပ္ပါယ်အပိုဒ်ကိုသုံးပါဒါက 35 နိုင်ငံနှင့်နေရာအမည်များ
ပြင်သစ်ဆွေမျိုး Clauses: ပြင်သစ် Grammar နှင့်အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ
'' Est-Ce Que ': ဘယ်လိုပွငျသစျထဲတွင်မေးခွန်းလွှာမေးပါရန်
ပြင်သစ်ပြီးပြည့်စုံသော participle ~ Pass တေးရေးဆရာ du ပါဝင်သူတင်ဆက်မှု
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: အရှေ့မှာရှိတဲ့စစ်ပွဲ, 1863-1865
အဆိုပါညီအစ်ကိုများ Grimm ကမ္ဘာ့ဖလားမှဂျာမန် Folklore ယူဆောင်
Moundbuilder Myth ဟာ - တစ်ဦးစိုး၏သမိုင်းနှင့်မရဏ
Kickstarter ကတဆင့်ရုပ်ပြ ဖန်တီး. Publish
မည်သို့ Do မိုးကြိုး Form ကို?
နွေရာသီ5သမ်မာကမျြးမှတ်ဉာဏ်အခနျးငယျ
အိမ်များတစ်ပြခန်း, သိကောင်းစရာများတစ် Paint Bucket
အဆိုပါ Alamo ၏တိုက်ပွဲ
Vasco Nuñezက de Balboa ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
တစ်ဦးကနျ Standard ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးစားပွဲတင်နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေ calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
2007 ခုနှစ်ဆူဇူကီး GSXR-1000 အပြီးအစီးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ထင်မြင်ချက်များ
သံပုရာဖျော်ရည်၏ pH ဟာဘာလဲ,
Value ကို Added အသုံးပြုခြင်းစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွက်ချက်
တစ်ဦး Counterexample အားဖြင့်မှားနေသောအငြင်းအခုံစုံစမ်းလုပ်နည်း
ပွငျသစျထဲတွင်နှုတ်ဆက်ပါတယ် - au revoir, salut, Bonne Soirée, မခွင့်ပန်ပြီးမှ
စာအုပ်ကလပ်မေးခွန်းများ '' ခါးသီးသောနှင့်ချိုမြိန်၏ထောင့်အပေါ်ဟိုတယ် ''
အလုပ်အဖွဲ့ထဲကများအတွက်အကောင်းဆုံး R & B Songs ရဲ့